🥇 ▷ WhatsApp waxay heli doontaa shaqo cusub si loo ilaaliyo farriimahaaga ✅
WhatsApp waxay heli doontaa shaqo cusub si loo ilaaliyo farriimahaaga
WhatsApp waa adeegga fariimaha deg degga ah iyo isgaarsiinta ugu caansan adduunka. Dhab ahaantii, waa app waxaa isticmaala maalin walba malaayiin isticmaale oo adduunka ah. Taasi waxay dhahday, waa wax dabiici ah inaan hadda aragno shirkadan ay leedahay shirkadda Facebook oo tijaabineysa hirgelin cusub oo muhiim u ah Android.
Wax kuu saamaxaya inaad xafido dhamaan fariimahaaga waqti badbaado ah!
Barxada Facebook-ga ayaa wali ah doorashada ugu jecel malaayiin dad ah. Marka hore by fududnaanta wada xiriirka, qaabeynta, ama xaqiiqda fudud ee inta badan caan ku ah inay adeegsato. Waxaa intaa dheer, waa u bilaash labada Android sidoo kale macruufka, ama nooca webka.
Maxaa ku cusub jidka loo maro barnaamijka WhatsApp Android
Si kastaba ha noqotee, sida isticmaale kasta oo WhatsApp kuu sheegi doono, waxaa jira farriimo aan dhammaad lahayn oo ku dhex wareegaya madxafka dhexdiisa. Laga soo bilaabo salaanta subax wanaagsan ee kooxda dhexdeeda ilaa arrimaha gaarka loo leeyahay. Marka taa la eego, waa wax iska caadi ah in adeegsaduhu rabo inuu ka ilaaliyo waxyaabaha noocaas ah indhihiisa.
Dareenkan, waxaa jira baahi loo qabo xasillooni dheeraad ah, gaar ahaan WhatsApp. Wax ka koobnaan kara furaha khaaska ah ee app-ka ah, ama barnaamij dhinac saddexaad ah si loo xakameeyo WhatsApp adigoo sugaya. Si kastaba ha noqotee, barnaamijka laftiisa ayaa hadda tijaabinaya hab cusub oo amniga ah.
In kasta oo soosaarayaasha qaarkood horey u soo bandhigaan habab si gaar ah loogu “xayiro” barnaamij, hadana si kastaba ha noqotee waa xal dibadeed. Taasi waxay tidhi, barnaamijkeeda Android, WhatsApp waxay durbaba dhaqan gelineysaa furaha faraha oo fur. Wax dhowraya dhamaan waxyaabaha kujira iyo fariimahaaga.
Kobcinta amniga aaladda Facebook-ga
Marka loo eego baaritaanka WABetaInfo, WhatsApp for Android gudaha Beta v2.19.221 wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay adeegsadaan farsamadan. Tani waa hab wax ku ool ah oo arjiga lagu xiri doono kaliya iyadoo la xaqiijiyo sawirka faraha ee isticmaaley horay u diiwaangashan.
Haddii kale gebi ahaanba suurtagal ma noqon doonto akhrinta farriimaha WhatsApp. Si kastaba ha noqotee, waad awoodi doontaa inaad ka jawaabto wicitaanada xitaa adigoon furneyn barnaamijka. Waxa ugu dambeyntii ilaaliya waxyaabaha ay soo diraan madal isgaarsiinta deg-degga ah oo ay iska leedahay Facebook.
Ka ilaali farriimahaaga indho shareerka
Tani waxay u baahan tahay taleefankaaga casriga ah ee Android inuu lahaado akhriska faraha. Waxaad markaa u baahan doontaa inaad isticmaasho beta-ka kore. Intaa waxaa sii dheer, nidaamka hawlgalka waa inuu noqdaa Android Marshmallow ama wixii ka dambeeya. Markaa waad dhaqaajin kartaa farsamadan cusub ee amniga.
Markaad raacdid tallaabooyinkan waxaad ka heli doontaa mashiinka WhatsApp – Settings – Account – Asturnaanta – Faraha faraha, ama qufulka faraha. Markii aad dhaqaajiso ikhtiyaarkan waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso farahaaga oo halkaas ka soo baxdo waxaad lahaan doontaa waxyaabahaaga si aad u ilaalin ah.
Xusuusin: Fadlan ogow inaad si toos ah uga jawaabi karto farriimaha WhatsApp-ka ka helay ee ka yimid ogeysiiska. Taasi waa jawaabaha dhakhsaha leh. Waxa kale oo aad ka jawaabi kartaa wicitaanada soo socda adigoon u furneyn inaad ku furto aaladda moobiilkaaga Android.
Xaqiiqdi, kaliya marka aad furaysid codsiga WhatsApp-ka ee kumbuyuutarkaaga waa inaad hubisaa. Wax kasta oo ujeedadeedu tahay in la ilaaliyo dhammaan waxyaabaha ku jira. Intaas waxaa sii dheer, waxaad dooran kartaa inaad qarin karto waxyaabaha ku jira ogeysiiska la soo bandhigay haddii qufulka cusub iyo habka amniga uu shaqeynayo.
Mar horeba tijaabada beta v2.19.221 ee Android
In kasta oo ay tani xaddidan tahay, dhab ahaantii waxay kor u qaadi doontaa amniga WhatsApp. Laga soo bilaabo halkan, xulashada waxaa loogu talagalay dadka isticmaala ee sidaas yeelan kara laba heerar oo amniga ah. Ta koowaad, ahaanshaha taleefanka gacanta, halka kan labaadna noqonayo “carqaladeynta” cusub ee dalabka laftiisa.
Ugu dambeyntii, waxaan mar labaad ku celineynaa in howlahan lagu qeybiyay kaliya kanaalka Android Beta. Gaar ahaan, laga bilaabo v2.19.221 waxaad sidoo kale ku rakibi kartaa isbarbar dhig faylka loo yaqaan “APK file” ee aad ka soo degsan karto xiriirintaan – APKMirror.
Isla hirgalintan ayaa gaari karta nooca xasilloonida ee Android iyo laga yaabee sidoo kale iOS mustaqbalka dhow.